ပဲခူး လူငယ် နှစ်ဦး ပစ် သတ်မှု ကို တစ်ပတ် အတွင်း ဖြေရှင်းပေးရန် မြို့ ခံများ စတင်တောင်းဆိုပြီ | The FNG
ပဲခူး လူငယ် နှစ်ဦး ပစ် သတ်မှု ကို တစ်ပတ် အတွင်း ဖြေရှင်းပေးရန် မြို့ ခံများ စတင်တောင်းဆိုပြီ
February 22, 2011 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်းက ပဲခူး လူငယ် နှစ်ဦး အသတ်ခံရမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ပတ် အတွင်း အမှုမှန်
စုံစမ်း ဖော်ထုတ် ပေးခြင်း မရှိ ပါက ပဲခူးမြို့ ရှိ လူငယ်များ နှင့် မြို့ ခံ များ က စစ်အစိုးရ ဆန့် ကျင် ကန့် ကွက် ပွဲ များ ကို
ဆက် တိုက် ပြု လုပ် သွား မည် ဟု Just Do It အဖွဲ့ မှ ကိုရဲ နိုင် က Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
ကို အောင်သူဟိန်း နှင့် ကိုစိုးပိုင် ဇော် တို့ နှစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်း ကို ယမန် နှစ် စက်တင်ဘာလ
က ပဲခူးမြို့ ဆေးရုံကြီးမှ ဆင်ဖြူကွင်း သုဿာန် သို့ ပို့ ဆောင်မီးသဂြိုလ် ခဲ့သည်။
← Operation Burma ဗီဒီယို လူမှု မီဒီယာ တွင် ပျံနှံနေ
နေရွှေသွေးအောင် ကို အာဏာလွှဲပြောင်း ရေး အကြံအား ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး လက်လျှော့ →
17 responses to “ပဲခူး လူငယ် နှစ်ဦး ပစ် သတ်မှု ကို တစ်ပတ် အတွင်း ဖြေရှင်းပေးရန် မြို့ ခံများ စတင်တောင်းဆိုပြီ”
phyogyi February 25, 2011 at 6:39 pm · ·
အဲဒီမအေလိုး ခွေးသူတောင်းစား comment..ရေးရင် ဘယ်သူမှပြန်မရေးနဲ့..သောက်ဆင့်မရှိတဲ့ကောင်ကို လူရာသွင်းမနေကြပါနဲ့..ဒီလိုကောင်စားမျိုးကအဖက်လုပ်မဲ့သူမရှိတော့..ဒါမျိုးလေးတွေရေးပြီးလူရာဝင်ချင်နေတာလေ…သူ့ကိုလူရာမသွင်းရင် ပြန်ပြီးတော့မရေးရင် ရှက်ပြီးမရေးရဲပဲပြစ်သွားလိမ့်မယ်..ရေးလည်းဘယ်သူမှမဖတ်ပဲနေလိုက်…
arnol February 24, 2011 at 11:33 pm · ·
မောင်လူဆိုး February 24, 2011 at 11:18 pm · ·
အွန်လိုင်းပဲမှာ မိန်းမလိုမိန်းမရပြောမနေနဲ့ မကျေနပ်ရင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချိန်းပြီး ဗြင်းလိုက် မျက်စိရှုပ်တယ်။ ကြာတော့မင်းတို့ဟာတွေလိုက်ဖတ်နေရတာနဲ့ကို အချိန်ကုန်တယ် ။ ချီးပဲ။
ပေါက်တယ်နော် မကျေနပ်ရင် ချိန်းပြီးဗြင်းလိုက်။ Real Joker ဆိုတဲ့ကောင်ရော ရေးတဲ့ကောင်တွေရော မကျေနပ်ရင်ချိန်းပြီးစော်ကြကွာ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရန်စောင်မနေနဲ့ မိန်းမတွေကြနေတာပဲ။
အောင်ပါလေ February 24, 2011 at 3:08 pm · ·
to real joker
ငါလည်း tiger လိုပဲ။တခွန်းပဲပြောစရာရှိတယ်….မင်းအမေငါလိုး…….
darling February 24, 2011 at 12:25 am · ·
အဆင့် မရှိတဲ့ သူနဲ့ ဖက်ပြောမနေပါနဲ့ တော့ ။သူ့ လိုဦးနှောက်မ၇ှိတဲ့ သူက အဲလိုပြောပေးမှ ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားနိုင်မှာလေ။သူ့ ပထွေးတွေက အဲလိုပြောမှကျွေးမှာကိုး။ဘေးမဲ့ ပေးထားလိုက်ပါ။တကယ်တွေးကြည့် ရင် သနားစရာပါ သူ့ အဖြစ်က။သူများဖင်ကြည့်နေ၇တဲ့ ဘ၀။
ZZ February 23, 2011 at 4:23 pm · ·
နင့်အမေလင်ဥပဒေက ဖြေရှင်းမပေးလို့  ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟဲ့ real dog@real stupid man ရဲ့ …:(
အောင် February 23, 2011 at 3:59 pm · ·
real Joker ဆိုတဲ့လူ က ဖွ တဲ့သတင်းဆို၇င် သူအရင်ဆုံးေ၇းတင်နိင်တာ များတယ် …တော်တော်ထူးခြားတာ ဘဲ ..။
၂၂. ၀၂.၂၀၁၁ ရက်နေ့တင်တဲ့ သတင်းက ဘယ် အချိန်တင်လဲမသိဘူး..။ သူက ၈နာ၇ီ ၅ မီးနစ် မှာ reply တင်နေပြီ။ ဒီဆိုဒ်ကိုအချိန်ပြည့် စောင့် ကြည့် ၇တဲ့ အစိုး၇၇ဲ့လူလား ၊? တင်တာနဲ့သိနိင်လောက်အောင် အချိန်ပြည့် computer ရှေ့ ထိုင်နေနိင်တဲ့ဘယ် လို အလုပ်မျိုးများရှိနိင်လဲ ၊၊ တော်တော် တော့ အဆဲ ခံနိင်တဲ့ လူဘဲ။
ဘလော့ဂါ February 23, 2011 at 9:14 am · ·
real joker ဆိုတဲ့မအေလိုးကလွဲရင် ကျန်သူအားလုံးပြောတာတွေကိုထောက်ခံတယ်
MrHumanright February 23, 2011 at 7:46 am · ·
to real jocker
eetiger February 23, 2011 at 7:10 am · ·
don’t be foolish idiots joker.
jack February 23, 2011 at 3:07 am · ·
real joker…မင်းက နကဖ သား လား..မင်းဘယ်မှာနေတာလဲ…မင်းမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလား….ကျောပေါ်ဒုတ်ကျတာတောင် ဒါးပြမှန်းမင်းမသိဘူးလား….မင်းလဲ သာတဲ့ဘက်ကိုလိုင်မဲ့ကောင်ပါ..မင်းလိုကောင်လဲ မပေါင်းအပ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်….မင်းလဲ လူကမွေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူး..မျက်စိ တစုန်းကိုကြည့်ပါ……..လေထဲမှာမပြောချင်ဘူး..လူချင်းဘဲတွေ့ချင်တယ်………????????????? ဘဲ……..
tiger February 23, 2011 at 12:07 am · ·
real joker ဆိုတဲ့ ကောင်…မင်းကို တစ်ခွန်းပဲ ပြောစရာရှိတော့ တယ်….ငါလိုးမသား……………………..
ချင်းလေး February 23, 2011 at 12:01 am · ·
real joker လား real Sucker လား…ဟေ့ကောင်ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်သူငယ်ချင်း ငါတို့ပြည်သူတွေကယဉ်ကျေးတယ်နော် .. သီးခံတတ်တယ်နော်. အဲဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးထင်သလို
လုပ်နေတတ်တဲ့ မင်း * * * တွေကို ကာကာပြီးပြောပေးနေ၊ နာပေးနေတာ ဘာလို့လဲကွာ? မင်းပညာတတ်တစ်ယောက်
ဖြစ်မယ်၊ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင် အဲလိုဖားဖားပြီးရေးမနေပါနဲ့ကွာ. မင်းလည်းမြင်နေတာပဲ..မင်းအနားက * * * တွေထဲက ဘယ်သူတွေကအဆင့်တန်းရှိရှိတွေးခေါ်တတ်သလဲ?နောက်ပြီးဘယ်သူတွေက (အပြုသဘောထက် ကိုယ့်စီပွားကိုပဲကြည့်တတ်ပြီး အားလံုးးသောပြည်သူတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်မနေကြပဲ) သူခိုးကလူပြန်ဟစ်နေသလဲဆိုတာကို ငါ့အနေနဲ့မင်းလိုငတုန်းကြီးနဲ့ယှဉ်မပြောတော့ပါဘူး … မင်းအမှန်ကိုမမြင်နိုင်တာလား၊ မမြင်ချင်တာလားဆိုတာမင်းနဲ့မင်းရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်ပဲသိမှာပါလေ.. ပြောသာပြောရတာ နတ်တွေ၊ဘုရားတွေကို မင်းကိုးကွယ်မှာမဟုတ်မှန်း သေချာနေသလိုပါပဲ..
real joker February 22, 2011 at 8:05 pm · ·
စောင့်အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ အာဝါဒ တွေ ချီးချောက်ရေနှုးပြီး ပြန်စားမလိုလား… သေသွားတဲ့ကာရကံရှင်ရဲ့မိသားစုကျေနပ်ဖို့ပဲလိုတယ်.. ပြစ်မှူကျူးလွန်တဲ့သူ ဥပဒေအတိုင်း တရားဥပဒေကဖြေရှငိးလိပ်မယ်…
မြန်မာပြည်ကဒီမိုကရေဆီသမားတွေအဆင့်တန်းရှိရှိတွေးခေါ်ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ကောင်းမယ်.. ပြောတဲ့စကားလူံးတွေနဲ့လူပ်ဆာင်ချက်တွေက ဒေါ်စုကအစ ဘယ်လိုမှ သဟဇတကိုမဖြစ်ဘူး။ သဟဇတမဖြစ်တော့ အစိုးရမပြောနဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့သူ့ဘာသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရပ်တည်နေတဲ့လူကတောင် စောင့်ဖက်လုပ်မှမဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့တွေအမှန်လုပ်ရမှာက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နိုင်ငံအတွက်တွေဘာတွေမပြောပဲ စက်မှူစုံတွေမှာလို လိုအပ်ချက်ကိုတောင်းဆိုတာပိုပြီးထိရောက်လိမ့်မယ်။
ငလင်း February 22, 2011 at 10:14 pm · ·
ဟေ့ကောင်ခွေးစကားမပြောနဲ့ ကာယကံရှင်မိသားစု ဘက်ကမင်းကိုယ်ချင်းစာပြီးတွေးကြည့် မင်းအမျိုးထဲကတယောက်ယောက်ကို အဲလိုပစ်သတ်သွားရင် မင်းဘယ်လိုနေမလဲ။မင်းမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။မင်းပြောတဲ့တရားဥပဒေဆိုတာကရော မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လောက်စိုးမိုးနေလို့လဲ။ပါဝင်ပတ်သက် တဲ့အရာရှိနဲ့တပ်သားတွေကိုဘယ်လိုအရေးယူပါတယ်ဆိုတာရော ပြည်သူတွေသိအောင် အတိအလင်းကြေငြာလားပြော။တနိုင်ငံလုံးကိုထားလိုက်ပါအုန်း ပဲခူးကပြည်သူတွေ လက်ခံကျေနပ်အောင် အထက်က ဗိုက်ရွဲရွှဲ ဗျူဟာမှူးတွေ တပ်မမှူးတွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အရေးယူတယ်ဆိုတာဖြေရှင်းချက်ထုတ်လား။မင်းပြောတဲ့ “ကာယကံ ရှင်မိသားစုကျေနပ်ရင်ပြီးတာဘဲ” ဆိုတဲ့စကားလုံးက ပြည်သူတွေကို သတ်ချင်သလိုသတ်ပြီး ဆောရီး လို့ပြောတာနဲ့အတူတူဘဲကွ။သေသွားတာတွေက လူတွေ ကွ လူတွေ၊နောက်ထပ်ပြောရရင် ပြည်သူတွေကွ ၊ပြည်သူတွေရဲ့အသက် အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အစား ပြည်သူတွေကိုသွေးအေးအေးနဲ့ သတ်နေတာကတော့ တော်တော်နှလုံးနာစရာကောင်းလှသကွာ။မင်းလဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်တတ်ပါစေ ငါ့ညီ။
ဇော်နိုင်ထွန်း February 23, 2011 at 8:25 am · ·
real joker ရေ……မင်းကစစ်ခွေးလားးးးး ?ဘာကောင်လဲသိခြင်လို.ပါ။လူသားလား?ဘာကောင်လဲ
ကိုတိုး February 23, 2011 at 9:51 am · ·
မင်းလဲ ကိုယ့်ဦးဏှောက်ကို အသုံးပြုပြီး စဉ်းစားပါဦးကွာ…..။ ဘဘကြီးတွေရဲ့ အထောက်အပံ့ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ နေရင်း အူစိုနေတော့ ဘာလုပ်လုပ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး လူတကာကို ဖင်ပိတ်ငြင်းမနေနဲ့…..real jocker။ မင်းကို ခန့်မှန်းကြည့်ရသလောက်တော့ မိဘဆွေမျိုးမရှိဘူးထင်တယ်၊ တစ်ကောင်ကြွက်လား ဟေ့ကောင်…..။ မိသားစုနဲ့ မနေဘူးတဲ့လူတွေက မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြဘူး…..မင်းလဲ မင်းမိသားစုထဲက ကိုယ့်ညီ၊ ညီမတွေကို ဒီလို လက်နှက်ကိုင်ပြီး နိုင်ထက်စီးနင်းပြုမူပြီး အနိုင်ကျင့်ခံရရင် ဘယ်လိုနေမလဲ….မေးမယ့်သာ မေးရတယ် နားလည်မယ်လို့တော့ ထင်မထားပါဘူး။ အေး…..ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေဆိုတာ ဘယ်မှာမှ ရှာမရဘူး။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား……အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်နေလို့ ဟေ့ကောင်။ အခုအချိန်အထိ ပဲခူးကအမူနဲ့ ပက်သက်တဲ့ တရားခံတွေကို ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ….မင်းသိရင် ပြောပြပါဦး။ ဖြစ်တာပဲ ၄၊ ၅လ မကကြာပြီ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်ချက်တွေကို ပေးနိုင်လို့လဲ။ ရဲချုပ်ခင်ရီ ပြောပြောနေတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးနေပါတယ် ဆိုတာကို အဟုတ်ကြီးမှတ်မနေနဲ့…..။ လက်တွေ့ဘဝတွေထဲကိုလဲ နဲနဲပါးပါးထွက်လေ့လာဦး….. အထက်လူကြီးတွေ စောက်ထင်ကြီးအောင် ဘာလုပ်လုပ်ကောင်းတယ်ပဲ ပြောပြောမနေနဲ့….. မင်းပုံစံက ဖင်ချခံရတာတောင် ကောင်းတယ်လို့ ယူဆမယ့်ကောင် ထွီ………